Tiknoolajiyada tiknoolajiyadda ee xogta xogta macluumaadka ee Latin America - Geofumadas
Mee, 2014 Geospatial - GIS, dhowr
Mashruuca mashruuca PAIGH, hay'adaha ka socda dalalka 3 ee Laatiin Ameerika (Ecuador, Colombia iyo Uruguay) ayaa ka shaqaynaya mashruuca
«Scenarios ee falanqaynta isbeddellada cusub ee Hanti Dhaqanka Macluumaadka ee Latin America: caqabadaha iyo fursadaha».
Marka la eego macnaha guud waxaan kugu martiqaadeynaa inaad ka qeyb qaadatid sahamintan iyo sidoo kale inaad nagu caawiso daabacaadda iyo faafinta warbaahinta, halkaas oo ay ka helayaan akhristayaasha Geofumadas.
Ka dib casuumaadda in saaxiibadeena PAight ay noo soo direen.
Jaaliyada Latin America (hay'adaha dowliga ah, shirkadaha gaarka loo leeyahay, aqoonyahanada madaxa banaan, jaamacadaha iyo xarumaha cilmi baarista) waxaa lagu casuumay inay kaqeybgalaan sahaminta codsiyada isbeddelka tikniyoolajiyadeed ee kaabayaasha xogta ee Latin America oo lagu sameeyay qaab dhismeedka mashruuca cilmi baarista. falanqaynta isbeddelka cusub ee kaabayaasha xogta Xirmooyinka Macluumaadka ee Latin America: caqabadaha iyo fursadaha ». Mashruucan waxaa maalgaliyay PAIGH - Pan American Institute of Joography iyo Taariikhda waxaana fuliya jaamacada Cuenca (Ecuador), Universidad del Azuay (Ecuador), jaamacada jamhuuriyada (Uruguay) iyo Xafiiska Duqa Magaalada Bogotá - IDECA (Kolombiya).
Baadhitaanka ayaa looga golleeyahay in lagu aqoonsado codsiyada ee Latin America that link adeegyada da'ayeen xogta kaabayaasha iyo meel-ku-saleysan oo leh waxyaabo cusub oo technology sida qalabka mobile, dareemayaal weheliso qalabka mobile, Kombuyuutarada daruur iyo macluumaadka juqraafiyeed iskaa wax u qabso. Macluumaadka la uruuriyay waxay noqon doontaa mid waxtar leh si loo ogaado heerka horumarka mawduucan ku yaal Latin America.
Mawduucyada waxaa ka mid ah:
1 - KALA DUWANKA ARDAYDA, si loo ogaado codsiyada la soo saaray ama ku jira geedi socodka horumarinta.
2- KHATARAHA, loogu talagalay in lagu aqoonsado heerarka iyo qiyaasaha loo adeegsaday, faa'iidooyinkooda, xaddidnaanta iyo baahida loo qabo horumarinta mustaqbalka.
3-INDICATORS, in la ogaado in la aqoonsado habka qiimeynta iyo qiimeynta si loo qiyaaso wax ku oolnimada iyo saameynta uu ku leeyahay codsiyada bulshada.
4- WAXYAABAHA SAAMAYNTA, loogu talagalay in lagu aqoonsado habdhaqanka wanaagsan iyo duruusta laga barto heerka Ameerikaanka Ameerika, oo la fahmay sida habsocodsiinta wanaagsan ama qorshayaasha soo saaray natiijooyin la taaban karo oo la qiyaasi karo.
5 - KALA DUWAN EE ARDAYDA HORUMARINTA QAYBAHA KALE, in la ogaado codsiyada ay soo saareen hay'ado kale.
Natiijooyinka sahaminta waxaa lagu soo daabici doonaa warbixinnada mashruuca, wargeysyada mawduuca iyo maqaallada, sidaas awgeedna waxay ka qayb qaadanayaan bandhigyada codsiyada la soo sheegay. Waxaa intaa dheer, wadashaqeynayaasha ayaa lagu sheegi doonaa si ay u bixiyaan macluumaadka qirashada warbixinnada iyo maqaallada.
Helitaanka baaritaanka: Halkan
Wakhtiyada kama dambaysta ah ee soo dhoweynta jawaabaha: laga bilaabo 12 ee Maajo ilaa 7 ee June ee 2014.
Waad ku mahadsantahay horay u wada shaqeyntaada.
Daniela Ballari - daniela.ballari@ucuenca.edu.ec - Jaamacadda Cuenca (Ecuador)
Diego Pacheco - dpachedo@uazuay.edu.ec - Jaamacadda Azuay (Ecuador)
Virginia Fernández - vivi@fcien.edu.uy - Jaamacadda Jamhuuriyadda (Uruguay)
Post Previous«Previous SuperGeo galo isbahaysiga la GPS PL in ay bixiyaan xal macasha macruufka
Post Next Khariidadaha Bulshada ee Magaalada, daabacaad xiiso lehNext »